Mpɔtɛm 239 567 km²
Nnipa dodoɔ 31 072 940 ab. (2020)
Ghana anaa Gaana yɛ ɔman bi a ɛwɔ Abibiman atɔeɛ mantam hɔ. Aman a atwa ne ho ahyia no bi ne Côte d’Ivoire (ɛno wɔ atɔe fam), Burkina Faso (ɛno wɔ atifi fam), Togo (ɛno wɔ apue fam) ɛna Gulf of Guinea no wɔ anaafoɔ. Edin Ghana no kyerɛ “Ɔko mu Hene” na wɔnyaa saa din no fii tete Ghana Empire no mu.
Gold Coast nyaa ne faahodie wɔ afe apem aha-nkron aduonum nson (1957) mu fii wɔn sodifoɔ a na wɔne United Kingdom no. Ɛno ma Ghana bɛyɛɛ ɔman a edin nkan nyaa ne fahondie wɔ abibirim mantam ha.
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaana&oldid=123164"
Nsesae ba kratafa yi so da 8 Kotonimma 2022, mmere 09:54.